RASMI: Kooxda Roma oo xaqiijisay in Macallinkeeda uu ka tago dhammaadka xilli ciyaareedkan, kaddib markii… – Gool FM
(Rome) 04 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Roma ee dalka Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in Macallinkeeda Paulo Fonseca uu ka tagi doono kooxda dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Madaxweynaha Kooxda Roma ee Dan Friedkin ayaa xaqiijiyey in Macallinka reer Portugal uusan heli doonin heshiis kordhin cusub oo uu ku sii joogayo garoonka the Olimpico, kaddib xilli ciyaareed niyad-jab leh oo ay ku qaateen horyaalka Serie A.
“Anigoo ku hadlaya magaca qof walba oo AS Roma ah, waxaan jeclaan lahayn inaan ugu mahadcelinno Paulo Fonseca shaqadii adkayd iyo hoggaamintii uu muujiyey mudaddii laba sano ahayd” ayuu yiri Madaxweyne Dan Friedkin.
Tababare Fonseca ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay bisha June, waxaana Giallorossi ay fadhisaa kaalinta todobaad ee horyaalka Serie A, waxaana ay sagaal dhibcood ka dambeeyaan kooxda Lazio oo ku jirta kaalinta lixaad, kooxda ayaana xilli horeba gaartay go’aanka ay shaqada kaga direyso Macallinkeeda.
Heshiiskiisa ayaa si iskiis ah isku kordhin lahaa haddii uu kooxda u soo saari lahaa Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Roma ayaa xasuuq 6-2 kala soo kulantay kooxda Manchester United oo ay booqatay lugta hore ee afar dhammaadka Europa League, waxaana haddii ay doonayaan inay iska xaadiriyaan Final-ka tartankan laga doonayaa inay ku adkaadaan 4-0.